lundi, 15 juin 2020 21:28
Ambositra: Sanganehana ireo ray aman-drenin’ny mpianatra
Namoaka ny fanambarana ny DIDEC Ambositra fa dia « miverina any an-tsekoly ny mpanabe sy ny mpianatra rehetra ato amin’ny sekoly Katolika Diosezin’Ambositra manomboka ny talata 16 jona 2020 ».
Tetsy ankilany namoaka filazana ny Talem-paritry ny fanabeazam-pirenena sy ny fampianarana teknika sy ny fiofanana arak’asa, miaaraka amin’ny Komity miady amin’ny valan’aretina Covid-19 ato amin’ny Faritra Amoron’i Mania fa « ny mpianatra hanala fanadinana ihany no mianatra fa ny ankoatra izay tsy miverina any an-dakilasy ».
Sanganehana ireo ray aman-drenin’ny mpianatra manoloana izany.
lundi, 15 juin 2020 21:21
Tafika Malagasy: Feno 60 taona ny « Rezimanta Iraisam-piadiana Malagasy »
Feno 60 taona androany 15 Jona 2020 no nananganana ireo vondron-tafika voalohany tao amin'ny Tafika malagasy araka ny didim-panjakana laharana 60-102 ny 14 May 1960. Ny 1 RIAM (Régiment Interarmes Malagasy na Rezimanta Iraisam-piadiana Malagasy) izay nitoby teto Antananarivo, ary ny 2 RIAM tao Toliary no vondron-tafika voalohany nandrafitra ny Tafika an-tanety, anabakabaka ary andranomasina.
lundi, 15 juin 2020 21:18
Alakamisy Ambohimaha: Saika niharan’ny fitsaram-bahoaka ilay rangahy nanary zaza tany an-davaka
Mponina teo Alakamisy Ambohimaha, Distrika Lalangina, Faritra Matsiatra Ambony no niangavy mpivady nanana fiara androany tolakandro, mba hanenjika lehilahy iray mitaingina bisikilety nizotra nianavaratra nanaraka ny lalam-pirenena fahafito.
Voalaza fa nanary zazakely tany an-davaka io lehilahy io. Roso tamin’ny fanenjehana izy mivady, niaraka tamin’ny mafana fo sy tsara sitrapo.
Teny Mandalahy (RN7) no tratra ilay rangahy, saingy tsy teny aminy ny bisikiletany fa efa namidiny ary dia an-tongotra no nanohizany ny diany. Mbola teny ambozonany ny « badge » ahalalana ny momba azy sy ny orinasa iasany.
Niandahy niambavy ny fisamborana azy, ka nitondrana azy niverina tao an-tanàna. Avotra soa aman-tsara ilay zaza, ilay rangahy kosa saika niharan’ny fitsaram-bahoaka. Mitohy ny famotorana aton’ny zandary azy ny aton’izao raharaha izao.
lundi, 15 juin 2020 19:13
Mety mahasoa anao: Ahoana no ahafantarana fa maty ny batterie na ny alternateur no tsy mi charge
Mihamangatsiaka izao ny andro. Na ny fiara, na ny moto dia matetika mamotsotra ny démarreur rehefa maraina ny andro, tsy mamaly ny batterie.
1- Test klaxon na jiro
Ny batterie n'ny fiara na moto matetika dia courant continue 12V. Tokony maharitra 3-4 taona eo ny batterie tsara, fa eo amin'ny 1 taona eo matetika ny batterie amidy eto Madagasikara, ireny batterie charge à sec ireny, izany hoe rehefa mividy azy, vao asiana asidra, dia tsy mila charger na fa avy dia mandeha tsikelikely ny charge.
Raha natory indray alina izy, dia tokony eo amin'ny 12.6V eo raha tester amin'ny multimètre position Volt courant continu.
lundi, 15 juin 2020 17:26